कम्युनिष्ट विधि पद्धतिको अबशान भएकै हो त ? - JanataPatra
कम्युनिष्ट विधि पद्धतिको अबशान भएकै हो त ?
८ भाद्र २०७७, सोमबार १३:५९ August 24, 2020 Janatapatra
रवि भण्डारी ।
आज बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड के हो ? यसले कसलाई बिरामी पार्छ वा निको बनाउछ । किन एसको आकार छैन दुनियाँ देख्दैन र भ्रममा आधारित झ्याली पिट्छ र भन्छ कोरानाको कारण मृत्यु भएका भन्दै आक्रान्त पारिरहेका छन । अब सकारात्मक सोचौ एकछिन यो कोभिडलाई छाडौ र तथ्यमा आधारित भएर सोचौ के मृत्युदर यहि हिसाबको थिएन एउटा बिरामी मान्छे अन्य कुनै समस्याको कारण मर्यो उसलाई कोभिडको कारण भनिदिने र आक्रान्त पारिरहने मेरो सरकार जनताहरुलाई कम्तिमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूती त देउ। आज निजि हस्पिटल हरु चलाउदैनौ । हामी भनेर यत्रो चुनौती दिईरहेका छन । सरकार यसका बारेमा स्पष्ट योजना किन दिन सकिरहेका छैनौ ।
राजनितिक कचिङ्गल कसले के पद पाउने भन्नेमा मात्रै मुद्दा घुमाईरहने हो । आमनागरिकलाई निराशाको भुमरिमा फसाईराख्ने हो? हामी जस्ता लाखौ युवाहरु सुदृढ राजनिति आजको आबस्यकता हो भन्दै चिच्याईरहने र शिरमा राखेका उच्च नेतृत्वले आत्मा केन्द्रीत सोछ मात्र राखेर बिकृत बनाई राख्ने हो । हामी त कलिलो मनस्थिति देखिनै राजनिती भनेको क्रान्ति हो क्रान्ती भनेको परिवर्तन हो र एउटा शिशुले जन्मपछी आफ्नो आमाको दूध चुस्न थाल्नु परिबर्तन हो भन्दै आएका मान्छे । घोषणापत्र लाई रटान लगाउदै हाम्रो साच्चै कम्युनिष्ट सरकार बन्दा त नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ र गर्छ । बिकासको दृष्टिकोणले हाम्रा गाउँ गाउँमा बिकासका मुल फुट्नेछ्न भन्दै गर्दा, लाग्थ्यो बास्तममा हामी हिडेको बाटो गलत छैन । तर आज सोचहरु उल्टा भएका छन बुझाई हरु एकीकृत छैनन ।
हिजो आफैले गरेका बाचाहरु निरर्थक लाग्न थालेको छ । ब्यक्तिबाद हाबी हुँदै जाँदा के अब कम्युनिष्ट विधि पद्धतिको अबशान भएकै हो त? आजको नेतृत्व गलत हुदा अरुले फाल्ने सामथ्र्य पनि राख्न सक्नुपर्छ । हामी बैचारिक कुरा गर्छौ बहस गर्छौ । आजसम्म यो पार्टी त बिधिको जगमा निर्माण भएको होनि हैन र कमरेड ? पुष्पलालके कम्युनिष्ट पार्टी बनाउदा मनमोहन, मदनले पार्टी संचालन गर्दै गर्दा ब्यक्तिगत स्वार्थ राखेको भए राजा संग झुकेका भए एउटा मन्त्री पद ठूलो हो त?
राज्य संयत्र तपाईं हरुकै कारण यत्रो बदनामी खेपिरहेको छ राजनिती प्रती नागरिकको दृष्टिकोण दिन प्रतिदिन खस्कदो छ। राजनितिकर्मिको सम्मान गाउगाउमा नेता बनेर तपाईका इमान्दार र मेहनती कार्यकर्ता जसलाई कुनै पद चाहिएको छैन। कम्युनिष्ट बनेर त्यसै जिबन बिताएका जो देश आफुले रोजेको पार्टिले सत्ता सन्चालत गर्दा यस्तो स्थिती होस भन्ने सामान्य कुरा पनि ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा राज्य प्रती कस्तो सोच बिकास होला? हाम्रो राज्य, राज्य बनिसकेको रहेनछ। कति बिकृती छ यो कोभिड दुनियाले स्थानिय तह सम्म ब्यबस्थापन प्रत्यक नागरिकले बुझेका छन । अब समयमै सोचौ यो कम्युनिष्टहरुले गरेर देखाउने समय हो। संक्रमितका पिढा त क्वारेन्टाइनमा बस्नेको बाध्यता र बिबशताको कुरा त व्याख्या नगरौ । हामीले सबै भन्दा पहिलो कुरा स्वास्थ्य हो भन्ने कुरा त देखियो । यो कुरालाई कोभिडले सिकाईदियो सम्झिनुहोस ६२र६३ मा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसले राजतितिक अधिकार प्राप्त भयो । तर गणतन्त्र आउदा जागिर खाएको मान्छे पेन्सन भएर घर फर्कने बेला भयो नेता ज्यु बर्गको कारण अगाडि जानुपर्ने आज जातिगत लडाई छ धार्मिक द्वन्द्व छ ।
बर्गको मुद्दा त कहाँ छ नेपालमा ? मुद्दा त पुस्ताको छ । गणतन्त्र पछि के परिबर्तन भयो त हिजो राजनितिलाई ज्यान फाल्न तयार भएका नेता त यति भ्रष्टिकरण भयो परिस्थिति हिजोको जस्तो छैन। युवाहरु नया ढङ्गबाट मुलुकलाई कसरी राजनिती चलाउन सकिन्छ त्यसका निम्ति पार्टिको बलमा अगाडि बढ्नु पर्यो । यस्तो सरकार त पंचायत र राजतन्त्रमा पनि थिएन र ? यो कुरा गर्ने बेला होइन काम गर्ने हो चेतना निर्माण गर्नुहोस। पार्टिको नाममा बहस हैन अब देश कसरी व्यबहारमा परिबर्तन गर्नुहोस । नागरिक स्तरमा बिश्वासको बाताबरण निर्माण गर्न सकिएन भने यो पार्टी अनि कम्युनिष्ट आन्दोलन जिवित रहिरहला ?
गेलुङखोला हाइडोपावर प्रति नेकपाको आक्रोस
लिदि पहिरो पीडितलाई पालिकाहरुको सहयोग
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०७:१२ Janatapatra 0
जनतापत्र ।एमाले भित्र आरोप प्रत्यारोपको श्रृखला जारी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध प्रतिगमनको मतिहारको...